Gudoomiyaha degmada Banderbeyala oo ka hadlay qorsheyaal lagu horumarinayo deegaanka – Radio Daljir
Abriil 30, 2012 12:00 b 0
Bosaso, Apr 30 -Gudoomiyaha degmada Banderbeyla ee gobolka Karkaar ayaa ka warbixiyay qorsheyaal horumarineed oo ka soconaya degmada Benderbeyla oo ka mid ah deegaan xeebeedyada Puntland ee gobolka Karkaar.
Gudoomiyaha degmada Benderbeyla Saciid Aadan Cali “Anteeno” oo maanta la hadlay Radio Daljir ayaa tilmaamay degmada inay ka bilaabeen barnaamijyo horumarineed.
Waxaa uu sheegay barnaamijka koowaad ee horumarinta degmadu inay ugu magacdareen “Samata Bixinta Degmada Benderbayla” oo ay kaga samata bixiyeen colaaadaha islamarkaana looga wada shaqaynayay horumarinta nabadaafadda, iyo soo afjaridda dhibaatooyinka.
Qaybta labaad ee horumarinta degmada Benderbayla ayuu sheegay in loogu magacdaray “Benderbeyla Ha Horayso” oo macnaheedu yahay haku horayso nabadglayada, dhaqaalaha, Soomaalinimada iyo hormuudka degmooyinka.
Gudoomiyaha ayaa gabagabadii tilmaamay inay jiraan dedaallo lagu dayactirayo xarumaha muhiimka ee dowladda sida saldhigyada booliska, dowladda hoose iyo adeegyada bulshada ee degmada Benderbayla.